Hal mid iska weydii DALKA JAPAN? | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka February 14, 2016	0 267 Views
Muqdisho (HIMILONEWS) – Dalka Jaziiradda ah ee dhaca bariga fog ee Asiya waxay dadkiisu ugu yeeraan dhulkii Qorrax-sinka—mana ahan dal kale waa JAPAN.
Taasna howlaha nadaafadda ee ka jira JAPAN.
Hadaba, hab-la-dhaqan sidee ah ayay bulshada JAPAN ka aaminsan yihiin shaqaalaha nadaafadda? Nolol sidee ah iyo door intee la eg ayay ku fadhiyaan shaqaalaha nadaafadda ee JAPAN?
Previous: Marka uu Ninku Naagtiisa Umuliyo—Booska Umulisada galo.
Next: Qalliin qaatay 10-saac oo ay qeyb ka qaateen 22-dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal oo lagu sameeyey mataano madaxyada iskaga dhagan
Somaaliya iyo Saxaafadeeda tebisa Dunida Colaadaha iyo Rejo-xumida.